နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: photoshop frame (၁)
photoshop frame လေးတွေကို ကျွန်တော် စုပြီးတော့ တင်ပေးပါ့မယ် . frame တွေကိုတော့ သိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ် . မိမိရဲ့ ဓါတ်ပုံကို ခေါင်းလေးကို အစားထိုး လိုက်တာလေ . သိတယ်မဟုတ်လား . သူက အဆင်သင့် လုပ်ထားပြီးသား frame ကို မိမိရဲ့ ပုံအပေါ်ကနေ တင်လိုက်တာနဲ့ လှလှပပလေး ဖြစ်သွားတာမျိုးပါ . ဒီနေ့တော့ လာဖတ်တဲ့သူတွေကိုလဲ အသစ်မရှိ မဖြစ်ရလေအောင် တင်ပေး လိုက်ပါတယ် . နောက်ထပ်လဲ အများကြီး တင်ပေးဖို့ ရှိပါသေးတယ် . နေမကောင်း သေးလို့ ခဏသီးခံကြပါဦး . နောက်ပိုင်း မင်္ဂလာဆောင် ပုံတွေကိုပါ ရှာပြီးတင်ပေးမယ် . အရင်ကတော့ ရှိတယ် အခုတော့ ဘယ်နားထား မိမှန်း မသိတော့ဘူး . မင်္ဂလာဆောင်ဆိုရင် သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးကို မျက်နှာကိုပဲ ရိုက်ပြီး လုပ်ထားပြီးသား frame ထဲကို မျက်နှာအစားသွင်း လိုက်တာနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသား ဖြစ်သွားရော .
Posted by Hajee Than Hla Oo at 4:27 AM